Đánh giá chi tiết HTC U12+: Xứng đáng là giấc mơ của một tín đồ công nghệ đích thực | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Đánh giá chi tiết HTC U12+: Xứng đáng là giấc mơ của một tín đồ công nghệ đích thực | Muasalebang in Muasalebang
0.1 Ukusebenza okuphezulu, ikhamera yobungcweti, idizayini ye-premium, nezinye izinto eziningi ezinhle i-HTC U12+ engezabo. Kodwa ingabe lokho kwanele? Ake sibuyekeze imininingwane ye-HTC U12+ nge-Hoang Ha Mobile ukuze sibone ukuthi lo mkhiqizo omuhle uzokunikezani.
0.2 Bona ulwazi olwengeziwe mayelana nohlelo loku-oda lwe-HTC U12+
1 Okudingayo yilokho i-HTC U12+ enakho
5 Izingxenyekazi zekhompuyutha
9 Izibuyekezo namanani okuthengisa
9.1 Bona imininingwane ye-HTC U12+ LAPHA
Ukusebenza okuphezulu, ikhamera yobungcweti, idizayini ye-premium, nezinye izinto eziningi ezinhle i-HTC U12+ engezabo. Kodwa ingabe lokho kwanele? Ake sibuyekeze imininingwane ye-HTC U12+ nge-Hoang Ha Mobile ukuze sibone ukuthi lo mkhiqizo omuhle uzokunikezani.
Bona ulwazi olwengeziwe mayelana nohlelo loku-oda lwe-HTC U12+
Okudingayo yilokho i-HTC U12+ enakho
I-U12+ iyi-smartphone yakamuva eyethulwe yi-HTC emakethe yaseVietnam. Kungashiwo ukuthi lokhu kuwufanele kakhulu ukuthenga umkhiqizo omkhulu kulesi sikhathi esiphakathi no-2018. Yebo, ngaphezu kokucaciswa “kwe-dinosaur”, i-U12+ iphinde ibe nezici ezikhethekile ezifana nezici zokuthinta onqenqemeni, ubuchwepheshe bomsindo we-Hi-Res, idizayini yangemuva ekhanyelayo, ukushaja okusheshayo. Quick Charge 3.0… nokunye.
Ukucushwa okuningiliziwe kwe-HTC U12 +:
Isikrini esingu-6.0 inch 18: 9 aspect ratio, QuadHD + resolution (1440 x 2880 pixels) kuphaneli yeSuper LCD6
Ubukhulu: 156.6 x 73.9 x 8.7 mm; Isisindo: 188 g
Iphrosesa: I-Snapdragon 845 octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver). I-Adreno 630 ihluzo core.
I-6GB RAM – 128GB ROM
I-Android 8.0 (Oreo) (izobuyekezwa ku-Android 9.0 P maduze)
Ikhamera eyinhloko ekabili engu-12 MP (f/1.8, 1.4µm, i-autofocus yesigaba esikabili) + 16 MP (12 MP, f/2.6, 1.0µm), i-autofocus yesigaba ne-laser focus, i-OIS, i-anti-shake electronics, 2x Optical zoom, 2-ithoni LED
Ikhamera yangaphambili 8 MP (f/2.0, 1.12µm), 1080p, HDR, panorama
Inzwa yezigxivizo zeminwe, i-HTC USonic enokukhanselwa komsindo okusebenzayo (ANC), i-HTC BoomSound™ i-Hi-Fi edition yomsindo eqinisekisiwe ye-Hi-Res
Ukuxhumana: 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C
Umthamo webhethri 3,500 mAh
Ngokufanayo nezizukulwane ze-U11 ne-U11 Plus, i-HTC U12 Plus isenayo i-Liquid Surface design. Nokho, idivayisi yaziswa kakhulu ngenxa yama-bezel acishe ancishiswa ngokuphelele. Ihambisana neqoqo lamakhamera amabili kanye nesikrini esisha esithrendayo esingu-18: 9. Ngaphezu kwalokho, i-HTC U12+ iphinde yathola izincomo eziningi ngokungalandeli ukunyakaza kwe-“Notch Notch” efana ne-P20 Pro, G7 ThinQ, njll.
I-U12+ inomklamo we-monolithic ngokuphelele wengilazi nohlaka lwe-aluminium futhi inesisindo esingafika ku-188g. Ngenxa yalokho, umshini unikeza umuzwa wokunethezeka kakhulu esandleni. Nokho, kusafanele uthenge ikesi ukuze ulivikele ukuze ugweme umonakalo ongadingekile.
I-HTC U12+ ingase ingabi yinhle njenge-Galaxy S9 noma ihluke njenge-Essential Phone, kodwa kukhona okuthile ngendlela i-HTC eyiklama ngayo okwenza amafoni ayo agqame ngempela.
I-HTC U12+ ingenye yama-smartphones adonsa amehlo kakhulu emakethe yocingo namuhla.
I-U12+ inemibala emithathu ongakhetha kuyo okuhlanganisa Okuluhlaza okwesibhakabhaka, iGlamour Red kanye neCeramic Black. Konke kuhle kakhulu, nakuba inguqulo eluhlaza okwesibhakabhaka ithandwa kakhulu ngoba inomhlane obala okwazi ukubona ngaphakathi. Ngeshwa, kunezinguqulo eziMnyama neziBomvu kuphela eVietnam.
Xem Thêm Đánh giá 16 mặt nạ dưỡng da nào tốt đang bán chạy nhất hiện nay | Muasalebang
Kumele kuqashelwe ukuthi inguqulo emnyama iseyingilazi kuphela, ayenziwa nge-ceramic njengoba igama liphakamisa. Zonke izinhlobo ezintathu zembozwe ngesendlalelo se-Gorilla Glass 3 esikhundleni se-Gorilla Glass 5 entsha. I-HTC ithi basebenzisa lolu hlobo lwengilazi ngoba iyakwazi ukumelana nokuqhekeka – iyaklwebheka futhi yenza amaphethelo edivayisi athambe.
Nakuba kunemibono eminingi ehlukene mayelana nezinkinobho zomzimba zomshini, kodwa ngombono wami, kuhle kakhulu futhi umklamo uhambisana kakhulu nomshini. Ngisho kuqhathaniswa Samsung kanye iPhone amafoni, kungcono kakhulu.
Zizwa ukuze ubone ukuthi zinhle kangakanani lezi zinkinobho
I-HTC U12+ ifika nesikrini esingu-6-intshi se-Super LCD6 esingu-18:9 nokubukeka kwe-QuadHD+. Isibonisi salesi sikrini sikhanya kakhulu futhi sibukhali. Inikeza ama-engeli amahle kakhulu wokubuka kuzo zonke izimo zokukhanyisa ezifana nobusuku noma imini.
Iphrofayili yombala ye-DCI-P3 ezenzakalelayo igcwele ngokweqile, kodwa ungakwazi ukuyilungisa kalula kumenyu yezilungiselelo.
Ngaphandle kwalokho, i-HTC iphinde yahlanganiswa nesici se-U12 + Esihlala siku-Display ukuze isize ekuboniseni izaziso nesikhathi ngisho nalapho isikrini sicinyiwe. Ngenxa yesikrini se-LCD, lesi sici ngeke sisebenzise amandla ebhethri amaningi.
Uma kuphela kumakethe yangempela yama-smartphone e-Vietnam, i-HTC U12+ izoba i-smartphone ye-Android eletha okuhlangenwe nakho okushelela kakhulu owake wakusebenzisa.
Ukusebenza kwe-HTC U12+ nakho kuhle. Idivayisi ifakwe iphrosesa ye-Qualcomm enamandla kakhulu engu-2.8GHz Snapdragon 845 okwamanje. Okuhambisana nayo yi-6GB ye-RAM. Yonke imisebenzi efana naleyo oyenzayo isingathwa umshini ngendlela eshesha kakhulu. Ungakwazi futhi ukugcina idatha ngokunethezeka ngememori yangaphakathi efika ku-128GB.
Uma uthanda izikolo ezikhishwe ama-ejensi wedatha avela ku-Geekbench 4, Antutu kanye ne-3D Mark, ungalandela imiphumela engezansi:
Ngokuhlola ku-Geekbench 4, i-HTC U12 + ifinyelele amaphuzu angu-2362 anomongo owodwa. Ngaleso sikhathi, i-OnePlus 6 ithole angu-2454, i-Galaxy S9 yathola angu-2,144. Ngokuhlolwa kwe-multi-core, i-U12+ ithole amaphuzu angu-8,910, kuyilapho i-OnePlus 6 yathola angu-8,967 kwathi i-Galaxy S9 yathola angu-8,116.
Ku-AnTuTu, i-U12+ ithole amaphuzu angu-267,560, i-OnePlus yathola amaphuzu angu-262,614 kanye ne-Galaxy S9 266,559 amaphuzu. Ekugcineni, ku-3D Mark, i-HTC U12+ ithole amaphuzu angu-4,537, kuyilapho i-OnePlus 6 ne-Galaxy S9 yathola amaphuzu angu-4,680 nangu-4,672, ngokulandelana.
Kuhle ukuthi i-HTC U12+ emakethe yaseVietnam iza nenguqulo yememori yangaphakathi engu-128GB futhi kuzoba ngcono kakhulu ngenguqulo engu-64GB kwezinye izimakethe. Ungakwazi futhi ukuyikhulisa ngekhadi le-MicroSD kuze kufike ku-2TB.
Kudabukisa ukuthi i-U12+ iphucwe imbobo ye-headphone engu-3.5mm ukuze kwenziwe idivayisi ibe mncane, kodwa i-HTC ayizange isinike i-adaptha yekhebula ye-USB Type-C kukhithi. Ngakho-ke, kuzodingeka uthenge izesekeli ezengeziwe kuwebhusayithi yenkampani noma ngaphandle ukuze uzisebenzise.
Ngokubuyisela emuva, i-U12+ iza nehedisethi ephezulu ye-HTC USonic. Ikhwalithi yayo yinhle ngempela uma ifakwe ukukhansela umsindo osebenzayo.
I-HTC U12+ iyi-smartphone enhle kakhulu yama-audiophiles, nakuba ingenayo imbobo ye-headphone engu-3.5mm.
Izipikha ze-BoomSound nazo zithatha umuzwa we-U12+ ziwuyise ezingeni elisha. Umsindo wayo uphezulu futhi ucacile. Uma ulalele umculo ngaphandle kwentambo, izindaba ezinhle ukuthi i-U12+ isekela i-Qualcomm aptX HD kanye namakhodekhi e-Sony LDAC kumsindo wokucaca okuphezulu okungu-24-bit.
Mayelana nohlelo lwebhayomethrikhi. Inzwa yezigxivizo zeminwe zangemuva ye-U12+ ingenye eshesha kakhulu engake ngayisebenzisa. Ngaphandle kwalokho, idivayisi iphinde ihlanganiswe nesici sokuvula ngobuso. Kuyashesha futhi. Ngisho noma ubheka nje esikrinini sokukhiya, idivayisi izovuleka cishe ngokushesha. Iphinde ibe nemodi “yokukhanya okuphansi” ukusiza ifoni ibone ubuso bakho ebusuku.
I-U12+ inebhethri elingu-3,500 mAh futhi izokunikeza amandla anele osuku olude lokusebenzisa. Kuyathakazelisa ukuthi i-U12+ isekela ubuchwepheshe bokushaja okusheshayo be-Qualcomm’s Quick Charge 4.0, nakuba ishaja efakiwe isekela kuphela ukushaja okusheshayo okungu-3.0. Ngaphezu kwalokho, idivayisi futhi inokwesekwa kwe-USB Power Delivery (PD) uxhumano / izinga lokushaja.
Enye into, naphezu kokuqedwa ngengilazi, kodwa i-HTC U12 + ayisekeli ukushaja okungenantambo.
I-HTC U12+ inekhamera engemuva ekabili ehlanganisa inzwa engu-12MP ebanzi, i-F/1.75 aperture kanye nelensi yocingo engu-16MP ene-F/2.6 aperture. Zombili zinobuchwepheshe bokuqina be-OIS optical stabilization kanye ne-EIS electronic stabilization.
Leli qoqo lekhamera lingathatha izithombe ezimangalisayo kuzo zonke izimo zokukhanya kokubili ebusuku nasemini. Nazi ezinye izithombe zokuhlola ezisuka kule khamera. Qaphela, inqanyuliwe, ungabona isithombe sekhwalithi ephezulu LAPHA: (iyabuyekeza)
Imibala ekhiqizwe kabusha ezithombeni mihle kakhulu futhi inemininingwane. Akulona ihaba ukusho ukuthi nge-HTC U12+ udinga nje ukuyiphakamisa ukuze uthathe isithombe, idivayisi izonakekela okunye.
I-HTC isaqhubeka nokuba nefoni enekhamera ephezulu
Njengoba ungabona ezithombeni ezingezansi ukuqhathanisa phakathi kwe-U12+ ne-Galaxy S9. Isithombe esivela ku-Galaxy S9 ngakwesobunxele siyakhanya kancane futhi siveza amaphuzu avelele kakhulu. Nokho, i-U12+ inemodi yayo ye-Pro (ukudubula okuphrofeshinali) uma ufuna ukulawula okwengeziwe ezithombeni zakho. Ukuqoshwa kwevidiyo kubuye kube nezindlela eziningi ezifana ne-panorama, isivinini esikhulu kanye nokunensa okukhulu.
Iqoqo lamakhamera amabili angu-12MP/16MP livumela i-U12+ ukuthi ithathe izithombe ngemiphumela ye-bokeh yobungcweti. Ungakwazi ukulungisa ngokuphelele ukufiphala kwesithombe ngaphambi nangemva kokusithatha. Ngisho nohlelo lokusebenza lwekhamera lunikeza nokususwa kwefonti okuzenzakalelayo.
Ngokwamandla okurekhoda ividiyo, i-U12+ ingathwebula ngokulungiswa kwe-4K. Isivinini esiphezulu ngu-60fps/s. Ngaphandle kwalokho, kunekhono lokuqopha amavidiyo ahamba kancane kakhulu ngokulungiswa kwe-1080p. Isivinini esiphezulu ngu-240fps/s.
Xem Thêm [Review] Top 8 nước hoa hồng được yêu thích nhất hiện nay | Muasalebang
Okuhambisana nalokho kuyisici se-Sonic Zoom (phambilini ebesaziwa ngokuthi yi-Acoustic Focus). Ikuvumela ukuthi usondeza esihlokweni ngenkathi uqopha ividiyo ukuze ukhulise umsindo wesihloko. I-HTC ithi umsindo uzophakama ngo-60%. Amandla okugxila esifundweni nawo akhuphuka ngo-33%.
Ayigcini nje ngokuba namakhamera amabili ngemuva, kodwa i-U12 + inamakhamera amabili angaphambili angu-8MP. Babelana ngembobo efanayo engu-F/2.0, ukudubula kwe-engeli ebanzi kufika kuma-degree angu-84. Ngeshwa, ayikho i-OIS. Izithombe ozishuthe zona ezine-U12 Plus zivame ukuba zinhle kakhulu. Iphinde ibe nemodi yobuhle. Le modi ikuvumela ukuthi ulungise ukushelela, ukukhanya, usayizi wamehlo kanye nesakhiwo sobuso.
Kukhona nezitikha ze-AR ezinezimo eziningi ezithokozisayo njengezinja, ama-panda, amakati, njll.
Ezinye izithombe ezithathwe kukhamera ku-HTC U12+:
Nakuba i-interface ye-HTC Sense iseyinhle kakhulu, ibushelelezi futhi izici eziningi ezithakazelisayo. Kodwa sekuyisikhathi eside i-HTC yenze okuthile “okuqhume”. Ku-U12+, kuseyisofthiwe efanayo kusukela enkathini ye-One M8, M9, 10 kanye ne-U11.
I-HTC Sense AYIYInhle, indala nje
Futhi, i-HTC ayibonakali ingabuyekezi noma yiziphi izinhlelo zokusebenza zayo eminyakeni edlule. Isibonelo, izinhlelo zokusebenza zesimo sezulu (isimo sezulu), i-Dial (dayela), Imilayezo (umlayezo) kanye newashi (iwashi) cishe azishintshile uma ziqhathaniswa nezinguqulo ze-HTC 10 eminyakeni emibili edlule.
I-HTC U12+ isebenzisa isistimu yokusebenza ye-Android 8.0 Oreo uma ifika emashalofini. I-HTC ithembise ukuletha isibuyekezo se-Android P kudivayisi uma konke sekumi ngomumo. Isici sokuthinta onqenqemeni ukuya konqenqemeni ku-U12+ naso sithuthukisiwe. Ibizwa nge-Edge Sense 2. Futhi ingenye yezingxenye ezihamba phambili zocingo.
Kunezengezo ezintathu ezintsha ku-Edge Sense okuhlanganisa: I-Smart Rotation, i-Smart Blur, kanye ne-New Double Tap. Ukuzungezisa okuhlakaniphile kuzokusiza ngenkathi ulele embhedeni futhi ubheke isikrini sefoni yakho. Uma izinzwa ze-U12+ ubambe idivayisi ikumodi yokuma ngobude, izozwa futhi ayisoze yaphenduka ngokuzenzakalelayo ibe kukwakheka kwezwe lapho ukhohlwa ukukhiya le modi.
I-Smart dimming izwa ngokuzenzakalelayo izimo zokukhanya ze-ambient. Izogcina isikrini singabi mnyama, ngisho nangemva kokuba isikhathi sokuvala sesiphelile.
Ekugcineni, ungakwazi ukuthepha kabili izinhlangothi zomshini ukuze wenze isenzo esithile. Ngokuzenzakalelayo, ukuthepha kabili kwenza imodi yesandla esisodwa isebenze. Lokhu kuzonciphisa isikrini sibe usayizi osebenziseka kakhudlwana. Nokho, ungakwazi esikhundleni salo ngokuvula izinhlelo zakho zokusebenza eziyintandokazi, ukubuyela emuva, ukwethula ibha yokuzulazula entantayo, noma uvule umsizi wakho obonakalayo.
Njengoba sekushiwo, uma uthanda lesi sici hamba uyothenga ikesi. Uma kungenjalo, uzochitha imali eningi ukulungisa umshini kanye nokushintsha ikhava.
Izibuyekezo namanani okuthengisa
Mayelana ne-HTC U12+, kunezizathu eziningi zokuthenga lo mkhiqizo. Yiqiniso, lena i-smartphone ephezulu. Kuyashesha futhi kunamandla, isikrini sihle, ukuthwebula izithombe kuyamangaza. I-HTC izama ngempela ukusungula izinto ezintsha nge-Edge Sense. Okungcono nakakhulu, i-U12+ nayo ingenye yamafoni asezingeni eliphezulu angenayo “Notch”. Uma ungumlandeli we-HTC, nakanjani uzoyithanda i-U12+.
I-U12+ iyifoni enhle futhi ayiphoxi
Njengamanje, i-HTC U12+ isatshalaliswa okwangempela kwa-Hoang Ha Mobile ngentengo engu-19,990,000 VND. Ungakwazi uku-oda kusengaphambili lo mkhiqizo kusukela ngoJulayi 5 kuya kuJulayi 18. Imali yediphozithi ngu-500,000 VND/umshini kanye nezikhuthazo eziningi ezifana nalezi:
Bona imininingwane ye-HTC U12+ LAPHA
Ithini imibono yakho nge-HTC U12+? Ungazithengela wena? Sazise ukuthi ucabangani ngokushiya amazwana ngezansi.